Mudara raTinashe Muchuri: February 2013
(picture: Aaron Chiundura Moyo and Musaemura Zimunya ejoying lunch and a chat at the previous ZWA meeting in Harare)
- February 23, 2013 No comments: Links to this post
NAMA kunananyanduri pane mubvunzo here apo?
Ndaongorora ndikapa kutenda kune avo vakasarudza vananyanduri vanofanira kupiwa mukombe weNAMA wegore ra2012 ini ndikagutsikana. Pavatatu vanoti Robson Shoes, Sthandazile Dube naDhege Tatenda Chinoda, ndinoti makorokoto kwamuri nekuti renyu basa rinotaura rega. Vanotarira vakanyatsobata ndokuona vakarova basa sebasa. Mubvunzo kwandiri hapana. Basa sebasa vakomana navasikana. Kune avo vasina kupinda muhurongwa hwemukombe nguva nemwaka inouya mukana uripo. Basa sebasa kunavanyanduri.